Tanzania dia nanatrika ny fivorian'ny Komisiona UNWTO ho an'i Afrika amin'ny taona ho avy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Tanzania dia nanatrika ny fivorian'ny Komisiona UNWTO ho an'i Afrika amin'ny taona ho avy
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Dr. Ndumbaro avy ao Tanzania sy UNWTO Pololishkavili
Tanzania dia kasaina handray ny vaomiera misahana ny fizahan-tany eran-tany an'ny Firenena Mikambana (UNWTO) ho an'ny Afrika amin'ny volana Oktobra amin'ny taona ho avy.
Ny UNWTO dia nanohana an'i Tanzania ho mpirotsaka an-tsehatra amin'ny fihaonambe 65th UNWTO Commission for Africa 2022 taorian'ny nanehoan'ity firenena afrikanina ity ny fahavononany handray ny fivorian'ny fizahan-tany ambony.
Ny fivoriana dia antenaina hatao ao Arusha, tanàna fizahan-tany any avaratr'i Tanzania.
Ireo mpandray anjara dia hahazo fotoana hitsidihana ireo valan-javaboary manan'aina sy ny Tendrombohitra Kilimanjaro, ankoatry ny toerana misy lova ara-kolontsaina marobe ao amin'io faritra io.
Ny UNWTO dia nanohana an'i Tanzania handray ny fivoriana nandritra ny fivorian'ny minisitra natao tany Namibia sy Cape Verde tamin'ny volana Jona ary tamin'ny fiandohan'ity taona ity izay nivorian'ny minisitry ny fizahantany afrikanina hiresaka ny sehatra fizahan-tany any amin'ny kaontinanta momba ny fampiasam-bola.
Nanaiky ny fangatahana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Andriamatoa Zurab Pololikashvili Tanzania ny mpampiantrano nandritra ny fihaonambe Brand Africa izay nokarakarain'ny UNWTO ary natao tany Windhoek (Namibia) tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity.
Ny fihaonana Brand Africa dia nahasarika Minisitra fizahan-tany 15 avy amin'ity kaontinanta ity izay nanaiky ny hiara-miasa mba hitady vahaolana hamelomana indray ny indostrian'ny fizahantany ny kaontinanta ankehitriny izay voakasiky ny valanaretina Coronavirus (COVID-19).
Nanome toky ireo minisitra fa hiara-hiasa ary hametraka fitantarana vaovao momba ny sehatry ny fampandrosoana fizahantany manerana ny kaontinanta afrikanina.
Fanapahan-kevitra amin'ny manohana an'i Tanzania ny kandidà hampiantrano ny Vaomiera 65 an'ny UNWTO ho an'ny fivoriana any Afrika amin'ny taona ho avy dia natao tao amin'ny Fivorian'ny Komisiona UNWTO faha-64 ho an'ny Africa izay natao tao amin'ny Nosy Sal Cape of Cape Verde tamin'ny herinandro lasa teo.
"Niresaka momba ny fivoriana faha-65 an'ny World Tourism Organization (UNWTO) hatao any Tanzania izay hametraka ity firenena ity amin'ny sarintany fizahan-tany izahay," hoy ny minisitry ny fizahan-tany ao Tanzania Dr. Damas Ndumbaro.
Ny fivoriana kasaina hatao amin'ny taona manaraka dia antenaina hisintona minisitra fizahan-tany miisa 54 avy amin'ny fanjakana afrikanina rehetra.
Notarihin'ny minisitra ny delegasiona tanzaniana tamin'ny fivoriana nifidianany ity firenena afrikanina ity ho mpikambana ao amin'ny UNWTO Program and Budget Committee (PBC).
Ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO dia hiara-hiasa hametraka fitantarana vaovao momba ny fizahantany manerana ny kaontinanta.
Mba hahatsapany tsara kokoa ny fahafahan'ny fizahan-tany hitarika fanarenana, hiara-hiasa amin'ny Vondrona Afrikana sy ny sehatra tsy miankina i UNWTO sy ireo mpikambana ao aminy mba hampiroborobo ny kaontinanta ho an'ny mpihaino vaovao manerantany amin'ny alàlan'ny fitantarana tantara mifono olona sy fanamarihana mahomby.
Amin'ny fizahan-tany dia ekena ho andry manan-danja amin'ny fampandrosoana maharitra sy maharitra ho an'ny kaontinanta, ny UNWTO dia nandray ny solontena avo lenta tamin'ny Fihaonambem-paritra voalohany momba ny fanamafisana ny marika Africa izay natao tany Namibia.
Nasongadin'ity kaonferansa ity ny fandraisan'anjaran'ny mpitarika politika ny firenena mpampiantrano Namibia, miaraka amin'ireo mpitarika ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina manerana ny kaontinanta.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nandray ny finiavana iraisana handinika indray ary hanomboka indray ny fizahantany.
"Ny toerana afrikanina dia tsy maintsy lohalaharana amin'ny fankalazana sy fampiroboroboana ny kolontsaina mamelombelona ny kaontinanta, ny tanjaky ny tanora ary ny fanahin'ny mpandraharaha ary ny gastronomia manankarena," hoy izy.